SomaliNet Magazine: MAARSO 2002
Magaceygu waa Cabdi Qafaar Maxamed Xassan, waxaan ahay ardey ka dhigta IT khaas ahaan webdesign and Programming simisterkii ugu danbeeyey College-ka Friesland College ee ku yaalla magaalada Heerenveen en dalka Holland. waxaana jeclaystey inaan dhalinta soomaaliyeed ee xiiseeya Computer technol
Horumarka iyo ilbaxnimadu waxay jaan guuriyaan wixii hore loo yiqiin oo dhan sida dhaqanka , hiddaha, iyo suugaanta iwm.?Haddaba haddaan soo qaadano wax- yaalaha aad u yaraaday oo uu ka mid yahay guurka. Maxaa keenay inuu yaraado ama isbadalo? Dhibaatada keentay yaraanshaha guurka waxaa loo aan
Qof ayaa loogu yeeray: Geesi, Dirac, Doqon, Jaahil. Bal jawaab ka bixi qofkii intaa o dhan laga daayay oo wax ka daran loogu yeeray, maxey tahay waxa loogu yeeray? Waan heli doonaa jawaabtaa.Maalin ayaan ka qayb galnay wax loogu yeeray Xaflad taas oo loogu yeeray dhammaan dadka oo dhan gaar ahaan S
Taariikhdu waxaa ay xusaysaa in dalkeenna Soomaaliya uu magac iyo maamuusba ku leeyahay noocyada ciyaareed ee kala duwan sida: kubbadda cagta, Kubbadda koleyga , Ciyaaraha fudud iyo kubbadda Miiska. Iyada oo ay noocyadaasi ciyaareed jireen ayaa haddana waxaa mar walba ka dhex muuqday dhallinyaro a
Waddamo badan oo ka mid ah kuwa horay u maray xagga dhaqaalaha ayaa muddo dheer dagaal kula jiray ka hortagga ?cayilka?. Dalka maraykanka waxaa lagu qiyaasaa in saddexdii qofba uu midkood cayilan yahay. Cayilka waddamada horay u maray waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay cudurrada halista ah. Waxaa
Bilowgii bishii juun 1977 kii ayaa madaxweyne Jimmy Carter dhambaal sir ah u soo diray madaxweyne Maxamed siyaad.Carter wuxuu dham balkiisaas ku leeyahay \_"arrinta ogaadenya waa howl aanan i khuseyn, haddiise
Wadaaddada ayaa iyaguna ka mid ahaa dabaqadaha Bir ma-geydada ee karaamada ku lahaa bulshada xoolo dhaqatada ah ee Soomaaliyeed. Wadaadku wuxuu ahaa nin matalayey mabaadi?da aasaaska u ah caqiidada bulshada ee diinta Islaamka ah. Tiro ahaan, wadaaddadu kuma ayan badnayn bulshada reer miyiga ah, qiy
Quraankeenna kariimka ah iyo sunnada nabigeena suubban calehi salaatu wasalaam (CSW) waxay marar badan ka hadleen danbiyada waaweyn oo la doonayo inuu qofka Muslinka ahi iska ilaaliyo. Iyada oo ay lagama maarmaan tahay in qofka Muslimka ahi uu iska ilaaliyo danbiyada kuwa yar-yar iyo kuwa waaweynba,
Waddan kasta oo ka mid ah waddamada Muslimiinta wuxuu leeyahay dad culumo ah oo aad u yaqaan diinta Islaamka. Dadkaas culumada ah bulshada inteeda kale ayaa waydiiya arrin kasta oo diinta la xiriirta. Shiikh Cabadalla Al-Nuuri ayaa ka mid ah Culumada ugu waaweyn oo soo maray waddanka Kuwait . Shi
Maxaabiistii uu Maraykanku ka soo qafaashay dalka Afganistaan waxaa la geeyey xarun ciidammada Maraykanku ay deggan yihiin oo ku taalla Guantanama Bay ee dalka Cuba. Dad badan waxa ay is waydiinayaan? iyadoo aan kullig
Aniga oo tix raacaya maqaalkii ay Layla Daahir ku soo qortay magazine-kan bishii Feberaayo ayaan doonayaa inaan ra?yigayga ka dhiibto arrinta ku saabsan xaalka Puntland, maadaama uu yahay mowduucu dood furan. Marka koowaad waa jiraan fikrado aan kugu raacsnahay isla markaasna waxaa jira kuwa aan u
Dhibaatadii 11-kii September aad ayay adduunka oo dhan u saamaysay. Maraykanku waa waddanka dhibaatadu ku dhacday, wuxuu aaminasan yahay in 15 ka mid ah 19-kii qof oo dhibaatada gaystay ay u dhasheen Sacuudiga, waxaa intaas sii dheer in Maraykanku aaminsan yahay Maskaxda ka danbaysay dhibaatada oo
Tan iyo intii dadka soomaaliyeed u soo qaxeen dalka dibaddiisa waxaa ay la soo baxeen dabeecado iyo cadooyin qalafsan oo aad durbo isweydiineysid waxa kalifay in si fudud loogu dhago nuglanaado dhaqamadan siloon ee laga dhaxlay dadka